Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2016 → novembre → 17 → Toamasina- Fonjaben’Ambalatavoahangy : Tera-tany frantsay telo miandry fitsarana ao ankehitriny
Tamin’ity taona ity, dia tera-tany vahiny 5 no fantatra fa efa nifonja teo anivon’ny fonjaben’i Toamasina, noho ny heloka vitany teto Toamasina. Ankehitriny dia misy 3 izy ireo no mbola miandry fitsarana ao Ambalatavoahangy ireo noho ny antontan-taratasy manenjika azy ireo.
Raha ny angom-baovao, dia tera-tany frantsay avokoa izy ireo, ka ny resaka tsy fandoavana volana trano fandraisam-bahiny sy fisolokiana olona, famonoana olona, raharaha ara-piarahamonina, ary fametavetana tovovavy malagasy amin’ny alàlan’ny fanaovana horonan-tsary mamoafady, no maha-voarohirohy namonjana azy ireo ao Ambalatavoahangy izao. Ny tena raharaha arahan’ny olona maso akaiky anefa izao dia ny mikasika ilay tera-tany frantsay voarohirohy namono frantsay roa tao Sainte – Marie; sy ity tera-tany frantsay vao niditra fonja vonjimaika ny talata hariva teo ity noho resaka fametavetana mamoafady ireo tovovavy malagasy, izay nivoaka ny marina noho ity tovovavy iray nampiasaina nefa tsy nomena sy tsy nahazo ny anjara volany, nefa vola be no azon’ilay tera-tany frantsay. Ity farany ity izay eo am-piandrasana ny taratasy fandroahana azy tsy ho ela raha ny vaovao. Raha ny angom-baovao farany mikasika ilay resaka vono olona tany Sainte – Marie iny, dia efa tonga ny ampahan’ireo fitiliana “ADN” natao tany Frantsa farany teo. Nisy tamin’ireo ampahan’izany kosa tsy nalefa teo anivon’ny fitsarana malagasy izay tsy fantatra ny antony.
Efa ao anatin’ny fanadihadiana faha-3 ny raharaha Sainte – Marie ny zokiolon’ny mpitsara mpanao famotorana izao, ka ho hita eo ny ho tohin’ny raharaha, satria fantatra izao fa misy mangataka fahafahana vonjimaika ireto olona voarohirohy miandry fitsarana ao Ambalatavoahangy ireto.